Ny didy folo amin'ny typografika | Famoronana an-tserasera
Ny didy folo amin'ny typografia
Misy lafin-javatra maro izay mitaona sy mamaritra ny kalitaon'ny sanganasa typografika. Betsaka amin'izy ireo no tsy raharahaintsika noho ny tsy fahalalàna ary amin'ny farany io dia niafara tamin'ny famoahana ny vokatra farany. Androany avy amin'ny tanan'ny Rob carney Hodinihintsika ireo teboka tena mahaliana folo izay tsy maintsy tadidintsika rehefa miasa miaraka amin'ny typografika amin'ny tetikasa rehetra isika.
Ampahatsiahiviko fa ireo fitsipika na torohevitra ireo dia tsy tanteraka ka miankina amin'ny asa ataontsika dia ho ampy kokoa na tsia. Ankafizo!
1 Kerning amin'ny alàlan'ny default? Sorohy izany!
2 Aza atao be loatra ny endritsoratra calligraphic na script
3 Rehefa miatrika vola be loatra ianao, dia aza mampiasa typeface
4 Tsy maintsy voafetra ny loharanom-pahalalana azonao
5 Miezaha tsy hanao sandoka ireo satroka kely
6 Aza mampiasa sora-mandry ihany koa
7 Amin'ny sora-baventy daholo? Fa maninona
8 Mampiasà loko mivadika ho tanjona estetika, fa tsy
9 Tsy hampifangaro serif ianao
10 Tsipika voafetra
Kerning amin'ny alàlan'ny default? Sorohy izany!
Kerning dia singa iray manandanja amin'ny famolavolana ka mety hanimba asa tsara izany raha tsy fantatsika ny fomba hahazoana izany. Ny ankamaroan'ny rindrambaiko dia manome antsika soatoavin'ny elanelam-potoana fa manandrana tsy milamina amin'ireo soatoavina ireo, tadidio fa mahafantatra mihoatra ny rindrambaiko rehetra ianao. Miezaha maka fotoana hametrahana ny elanelana ao amin'ny sangananao, na eo anelanelan'ny litera (Kerning) na eo anelanelan'ny teny (Tracking). Ao amin'ny Adobe InDesign dia voafehinao ireo soatoavina ireo ary hanovana azy ireo dia tsy maintsy mandeha amin'ny menio Preferences, Units sy increment, fitomboan'ny Keyboard, Kerning / Tracking fotsiny ianao.
Aza atao be loatra ny endritsoratra calligraphic na script
Ireo endritsoratra ireo dia ampifandraisina amina fotokevitra toy ny kanto na ny fahaizan'ny be pitsiny, saingy ny fisian'izy ireo dia tsy mitovy foana ny heviny ary ilaina ny misaintsaina ny filan'ny asantsika alohan'ny hampiharana ireo safidy hafa ireo. Amin'ny ankapobeny, ireo vahaolana ireo dia mazàna mankafy kokoa ny famoronana rehefa miseho amin'ny habeny lehibe izy ireo, amin'ny teny fohy ary mampiseho sary mivantana. Na izany aza tsy izany foana. Mazava ho azy, ho an'ireo faritra izay misy lahatsoratra marobe, hadinoy ity safidy ity satria azo antoka fa hiteraka tsy fahaizana mamaky teny sy manelingelina ny famakiana sy ny fahazoana ny hafatra.
Rehefa miatrika vola be loatra ianao, dia aza mampiasa typeface
Mety manana sary mahafinaritra ianao na volon-koditra manintona kokoa, fa raha sahirana loatra izy io ary misy mifanohitra be loatra aminy, dia asaina mifidy ambadika tsotra kokoa ianao na aza mampiasa lahatsoratra misy superimposed. Aza adino fa ny zavatra tadiavintsika ambonin'ny zavatra rehetra dia ny fiasa ary ny fampitana hafatra mazava. Raha sarotra amin'ny mpamaky ny mahazo ny hafatra dia ny mitady ny fahadiovana sy ny fahatsorana miaraka amina loko miloko na manjavozavo ny zavatra manan-tsaina indrindra tokony hatao.
Tsy maintsy voafetra ny loharanom-pahalalana azonao
Fantatray fa misy endritsoratra an-jatony tianao hampiasaina amin'ny volavolanao sy ny forongonao, saingy ny marina dia ny fampiasana mihoatra ny telo dia mety hanelingelina ny mpamaky fotsiny. Ity dia iray amin'ireo hadisoana lehibe indrindra azontsika atao amin'ny typografika satria toa fanodinkodinana hafatra miharihary izany. Raha ny lojika dia tsy maintsy tadidinao fa misy maningana, saingy izany dia izany, faningana. Raha misalasala ny amin'ny isan'ny endritsoratra ampiasaina ianao dia fantatrao fa tsy mihoatra ny telo!
Miezaha tsy hanao sandoka ireo satroka kely
Misy karazana endritsoratra maro samihafa miaraka amina takelaka kely namboarina ary mampiasa azy ireo ary tsy mampiasa hosoka, tsy mandeha mihitsy izany ary mifanohitra amin'ny firafitra. Raha ao an-tsainao ny mampiditra takelaka kely amin'ny lohateny, dia aza adino ny misafidy endri-tsoratra izay mampiditra azy ireo, misy karazana fonosana malalaka sy kalitao tanteraka mampiditra azy ireo.
Aza mampiasa sora-mandry ihany koa
Betsaka no mamily ny endritsoratra amin'ny tanana mba hanomezana azy ireo ny sora-mandry, na izany aza dia manimba ny fisehoany fotsiny izany. Tokony hiezaka ny hampiasa endritsoratra izay misy ny dikany misy ny sora-mandry. Ny marina dia sarotra be ny mahita font izay tsy manana kinova mifanitsy aminy amin'ny sora-mandry, fa raha izany no izy dia ario izy ary misafidiana iray hafa izay nampidirina ho azy ny kinova italiana ofisialy. Aza jerena ny safidinao "Misalisa diso" an'i Indesign ho anao.
Amin'ny sora-baventy daholo? Fa maninona
Raha manapa-kevitra ny hanoratra andian-tsoratra matevina misy na tsy dia matevina ianao dia tsy ho mora vakiana intsony. Na dia mety ho safidy tsara hafa aza izy ireo ary manome fanampin-tarehy hatsaran-tarehy indraindray, ao amin'ny vatanao lahatsoratra dia izy ireo ihany no hiasa ho toy ny rafitra tonga lafatra hampidirana korontana amin'ny famoronana anao. Ny atidohantsika dia mamaky teny an-tsoratra amin'ny alàlan'ny teny, fa tsy tarehintsoratra isaky ny litera, ary amin'ny dingan'ny famakiana dia tarihin'ny fahamaroan'ny tarehin-tsoratra miakatra sy midina izy io. Ny fanomezana lahatsoratra feno vola dia mety ho ezaka sarotra sy tsy ilaina.
Mampiasà loko mivadika ho tanjona estetika, fa tsy
Naseho fa rehefa mamadika ny lokon'ny lahatsoratray isika ary misafidy ny vahaolana amin'ny litera fotsy amin'ny fototra mainty, ny ataontsika dia manasatra ny mason'ny mpamaky satria manery azy hifantoka be loatra amin'ny loko fotsy isika ary izany no mahatonga ny rehetra. telo izay azo ampiharina karazana mpandray an-tsary ny masontsika amin'ny lanjany mitovy. Mazava ho azy fa azo ampiharina amin'ny tranga manokana sy amin'ireo lahatsoratra tsy matevina loatra izany.
Tsy hampifangaro serif ianao
Misy loharano izay mifangaro tsara sy ny hafa mifanohitra tanteraka aminy. Ny fampifangaroana serif roa samy hafa amin'ny sakana iray dia tsy handanjalanja ny ambaratongam-pahefana. Miitatra amin'ny loharano hafa koa izany. Tokony hialanao ny fampifangaroana endritsoratra roa izay mitovy. Raha nanapa-kevitra ny hampiasa font serif ho an'ny lohateny ianao dia ampiasao font sans serif ho an'ny vatana. Raha ny marina dia zavatra mila fitiliana izy hahitana ny vahaolana tsara indrindra.
Miezaha tsy mampiasa andalana lahatsoratra lava be. Izahay dia manondro ny sakan'ny tsanganana na ny halavan'ny tsipika an-tsoratra. Raha lava loatra izany, na mifanohitra amin'izay, fohy loatra, dia handany vola bebe kokoa amin'ny mpamaky ny fananganana fehezanteny ary mety hisy fiatraikany amin'ny fahatakarana ny hafatra izany. Ny halavany tsara dia eo anelanelan'ny litera 45 sy 75.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Graphic Design » Ny didy folo amin'ny typografia
ERNESTO YEJAS dia hoy izy:
MAHAFINARITRA .. HANDEHA HANAO AKAUNT
Valio amin'i ERNESTO YEJAS
Ny andriambavy Disney dia nalaina tahaka ny zazavavy maoderina
Ny hosodoko solika an'ny István Sándorfi